OPPO A5 ကိုဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
OPPO A5: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia X5 ကိုဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Nokia X5 ကိုဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာမည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S10 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလများကသုံးဆကင်မရာပါရှိသည်
Galaxy S10 ၏ကင်မရာသုံးမျိုးကွဲကောလာဟလအသစ်များထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်ပုံဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်
Nokia X6 ကိုဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Nokia 19 Plus အဖြစ်ရောင်းချမည်
Nokia X6 ကိုဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ၌ Nokia 19 Plus အဖြစ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Nokia ဖုန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P9 နှင့် P9 Lite ကို Android Oreo သို့မတင်ပို့ပါ
Huawei P9 နှင့် P9 Lite အတွက် Android Oreo မရှိတော့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာတော့မည်မဟုတ်သည့်ဖုန်းများအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Moto Z3 Play ကိုသြဂုတ်လတွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Moto Z3 Play: စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချမည့်စျေးနှုန်းနှင့်ရက်စွဲကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိ Motorola ဖုန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤသည်မှာ Galaxy Note9၏ပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note9၏ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်များမှာပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့် Samsung phablet ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပေးသည့်အမှုများဖြစ်သည်
Oukitel K8: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
အာရှထုတ်လုပ်သူ Oukitel ၏ K8 သည်ဇူလိုင်လအကုန်တွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်ပြနေစဉ်
Android Jre 3, J20175နှင့် J20177Android Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှောင့်နှေးနေသည်
မျှော်လင့်ထားသော Galaxy J3, Galaxy J5 နှင့် Galaxy J7 2017 terminal များအတွက်စက်တင်ဘာလအထိလအနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်
OnePlus5နှင့် 5T သည် Project Treble နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
OnePlus5နှင့် 5T တွင် Project Treble အထောက်အပံ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးကိုအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ beta အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Exynos9ပေါက်ကြားမှုကြောင့် Galaxy Note 9810 စံနှုန်း
Geekbench မှာအခြေခံစံနှုန်းအသစ်ကိုအသစ်ထုတ်လိုက်ပြီး Galaxy Note9ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က Galaxy S9 + နဲ့တူညီတဲ့ပရိုဆက်ဆာနဲ့ဘယ်လိုဆင်တူတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
Motorola One ၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါက်ကြား
Motorola One ၏ဓာတ်ပုံအသစ်များသည်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာပြီးယခုတွင်အဖြူရောင်ဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသည်။
Samsung ၏ပထမဆုံး Android Go ကို Samsung အတွေ့အကြုံဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်
Android Go ပါသော Samsung ဖုန်းတွင် Samsung အတွေ့အကြုံရှိသည်။ မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှဒီဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor 10 GT, 8GB RAM နှင့် Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာပါသောမိုဘိုင်း။ သင့်ကိုတင်ပြပါမည်။
ငါတို့မှာအဆင့်မြင့်အသစ်တစ်ခု! နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Huawei သည် Honor 10 GT ကို၎င်း၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ် 8GB RAM memory ဖြင့် Honor 10 GT ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းကို 8GB RAM ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်းလ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် GPU Turbo ပါဝင်သည်။
Galaxy Tab S ၏စတုတ္ထမျိုးဆက်ဖြစ်လာမည့်ပထမပုံရိပ်သည်စစ်ထုတ်ပြီးမကြာမီကထက်ပိုမိုပါးလွှာသော frames များကိုပြသထားသည်။
Huawei Y5 (2018) ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
Huawei Y5 (2018) ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Xiaomi Mi A8.1 ၏ Android 1 Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
Xiaomi Mi A8.1 မှ Android 1 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမှားများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
lava အနီရောင်ရှိ OnePlus6သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
lava အနီရောင်ရှိ OnePlus6ကိုတင်ပြပြီးပါပြီ။ ချော်ရည်အနီရောင်ရှိသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku အထူးထုတ်ဝေမှုသည် ၁.၆၇ သန်းရှိသည်
Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku အထူး Edition တွင် ၁.၆၇ သန်းကြိုတင်မှာကြားထားပါသည်။ ဖုန်း၏ဤအထူးထုတ်ဝေမှု၏အောင်မြင်မှုကိုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei P10 Lite နှင့် Mate 10 Lite သည် Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
Android 8.0 Oreo သည် Huawei P10 Lite နှင့် Mate 10 Lite တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ဖုန်းများသို့စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောအသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင် OnePlus2အသစ်ကိုအနီရောင်ဖြင့်ကြေငြာနိုင်သည်
OnePlus သည်အနီရောင် OnePlus အကွာအဝေးအတွင်းအရောင်သစ်ကိုကြေငြာနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဖြန့်ချိပေးသော update အားလုံးသည်ယခင်က beta အဆင့်၊ အဆင့်သို့သွားသည်။
Nubia Z18S သည်ထပ်မံပေါက်ကြားခဲ့ပြီးရှေ့ကင်မရာမပါဘဲမျက်နှာပြင်နှစ်ဆပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်
Huawei သည် Android ဖုန်းများအတွက်ဖုန်း ၇ ခုကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်
Huawei နှင့် Honor ဖုန်း ၇ လုံးသည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်မည်။ ဒီအပ်ဒိတ်ကိုလက်ခံရရှိမည့်မော်ဒယ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus သည်၎င်း၏ဖုန်းများအားသုံးနှစ်ကြာ update များကိုပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများပေးမည်ဟုကတိပေးသောအမှတ်တံဆိပ်မှကြော်ငြာအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
HiGame - စျေးကွက်ရှိဂိမ်းကစားသူများအတွက်အစွမ်းထက်ဆုံး mini PC
Chuwi HiGame - ဂိမ်းကစားသူများအတွက်စွမ်းအားအနိမ့်ဆုံး Mini PC ကိုသိုထားပါ။ ဒီစွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းအတွက်ဒီသေးငယ်သော PC mini အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S9 ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းသည်ဤဆိပ်ကမ်းများ၏ FM ရေဒီယိုကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်ချစ်ပ်ကိုသက်ဝင်စေသည်။
Snapdragon Wear 2500: ကလေးစမတ်နာရီများအတွက်ပရိုဆက်ဆာများ။ Qualcomm သည်အိမ်ရှိကလေးငယ်များအတွက်နာရီများကိုလောင်းသည်။
၎င်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Galaxy Note9ကိုသြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ပြသထားသည်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာကောလဟာလများအပြီးတွင် Samsung ၏ high-end ကိုယနေ့ပြသလိုက်ပြီဖြစ်သည်
၁၇ ရက်အတွင်းမှာ Xiaomi က Mi Band3ဟာယူနစ်ပေါင်းတစ်သန်းရောင်းချခဲ့တယ်
Xiaomi Mi Band3သည်ရောင်းအားတစ်သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Xiaomi ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တရုတ်လက်ဝတ်ရတနာများ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo Find X အသစ်၏နောက်ခံပုံများကို Download လုပ်ပါ
ဤဆောင်းပါး၌ Oppo Find X အသစ်၏နောက်ခံပုံများအားလုံးကိုသင်ပြပါမည်
Samsung သည်ဇူလိုင်လတွင်၎င်း၏ဖုန်းများကို Android Oreo တွင်အဆင့်မြှင့်တင်မည်
Samsung သည်ဇူလိုင်လတွင် Android Oreo သို့ပုံစံအမျိုးမျိုးကို update လုပ်မည်။ Samsung ဖုန်းများသို့လာမည့် update အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi6Pro သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးသိသည်
Xiaomi Redmi6Pro ၏တရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့ကိုသင်ပြောပြပါမယ်
Nokia 5.1 ကိုဇူလိုင်လမှာဥရောပမှာဖြန့်ချိမှာပါ
Nokia 5.1 ကိုဇူလိုင်လမှာဥရောပမှာရောင်းချမည်။ ယခုရုရှား၌ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Pad 4: တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏တက်ဘလက်အသစ်
Xiaomi Mi Pad 4: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယနေ့တင်ပြသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏တက်ဘလက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6၏ဘက်ထရီသည်အလွန်လျင်မြန်စွာယိုစီးသွားသည်။ OxygenOS အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုအပြီးတွင်ဖြစ်ပေါ်သောဤပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လအတွက် Galaxy S9 နှင့် S9 + လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်မှုကိုဥရောပတွင် download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ကီးဘုတ်နှင့်မျက်နှာပြင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းလဲနိုင်သောကိရိယာ
Xiaomi Mi 8 သည်ရောင်းအားတစ်သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8 သည်သီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းတစ်သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ ဤဖုန်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုအာရှစျေးကွက်တွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Alcatel 1: Android Go ဖြင့် ၀ င်ရောက်မှုအသစ်
Alcatel 1: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ အမှတ်တံဆိပ်၏မူလအဆင့် Android Go range အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကောလာဟလအသစ်များအရ Samsung Galaxy S10 တွင် iris စကင်နာမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
Samsung Galaxy S10 တွင်ကောလဟာလများဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ရာယခုအခါအရာအားလုံးက iris scanner ကိုအခြား module တစ်ခုအတွက်ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟုဖော်ပြနေသည်။
Lenovo Tab4သည် Android 8.1 Oreo ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်အဆင့်မြှင့်မည်။ ဒီတက်ဘလက်တွေလာမယ့်နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android မှစီမံခန့်ခွဲသောဆိပ်ကမ်းများ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများသည် ... မည်သူမျှလျစ်လျူရှု။ မရနိုင်သောအဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy J6: သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Galaxy J6 ကိုအလယ်အလတ်တန်းစား terminal ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးသည်။
Vivo သည် Helio P81 SoC ပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းဖုန်း Vivo Y22 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Vivo ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်စက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၊ Mediatek SoC နှင့် Vivo Y81 နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း Vivo Y81 ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်ကိုလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Mediatek Helio P22 ပရိုဆက်ဆာနှင့် notch design ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ အတော်လေးဆွဲဆောင်မှု။
ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများနှင့် Xiaomi Redmi6Pro ၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Xiaomi Redmi6Pro: ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများနှင့်စျေးနှုန်းပေါက်ကြားမှု။ လာမည့်အပတ်တွင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Xiaomi Mi Pad4၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Xiaomi Mi Pad 4: ဗားရှင်းနှစ်မျိုး၏စျေးနှုန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ စျေးကွက်သို့ရောက်သောအခါတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တက်ဘလက်သည်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုပိုမိုသိပါ။
Wiko Tommy 3: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ Android Go ဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Motorola One Power ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြသထားတယ်
ယနေ့သင်ပေါက်ကြားခဲ့သော Motorola One Power ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်
Huawei ၏ Mate 10 စီးရီးတွင်မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းပါဝင်သည်
Huawei Mate 10 စီးရီးသည်နောက်ဆုံးပေါ်မျက်နှာပြင်အသစ်နှင့် terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာဖြင့်သော့ဖွင့်နိုင်သည်
OPPO A73s: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
OPPO A73s: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း ဒီနွေရာသီမှာစပိန်ကိုရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖုန်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေပါ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ငါးရက်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်မည့် Redmi6Pro ၏တင်ဆက်မှုအပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်းတက်ဘလက်အသစ်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။ Xiaomi သည်လာမည့်ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏တက်ဘလက်အသစ်ကိုဖြန့်ချိမည်။ Mi Pad 25 ရဲ့ဆက်ခံသူ Mi Pad4အကြောင်းပြောကြတယ်
Google Lens ကို OnePlus အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ [apk]
သင် Google Lens နှင့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ OnePlus ကင်မရာ၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုပါကဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါမည်။
Energizer Hardcase H500S - 3000mAh ဘက်ထရီပါသည့်ကုမ္ပဏီမှခိုင်မာသည့်ဖုန်းအသစ်
Energizer သည်ဘက်ထရီများ၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် EnEnGizer သည်မကြာသေးမီက Energizer Hardcase H500S၊ အားနည်းချက်နိမ့်ကျသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် 3000mAh ဘက်ထရီကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ထက် ပို၍ အာရုံစိုက်ထားသောစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။
Xiaomi Redmi6Pro ကိုဇွန် ၂၅ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 ကိုသြဂုတ်လတွင်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များစတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Home, Home Mini နှင့် Google WiFi တို့ကိုစပိန်၌ရောင်းပြီးဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏စပီကာများစတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OPPO Find X ၏စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ရောင်းချသည့်နေ့ရက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်သစ်၏စျေးနှုန်းနှင့်ဥရောပတွင်ရောင်းချမှုကိုနောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြသည်။
Sony သည် Sony Xperia XZ3 ကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူလာလိမ့်မည်။ Sony Xperia XZ3 သည် GFXBench တွင်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အသေးစိတ်!
Huawei P9 သည် Android Oreo သို့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အံ့အားသင့်စေသည့်ကုမ္ပဏီ၏ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OPPO Find X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တရား ၀ င်တင်ဆက်ရန်ကြာမြင့်စွာမပြုရသေးသော ၆.၉၉ လက်မအရွယ် Xiaomi Mi Max3သည် Xiaomi Mi Max 6,99 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Samsung သည်၎င်း၏ဖုန်းများအတွက်ကိုယ်ပိုင် GPU များထုတ်လုပ်မည်
Samsung ကသူ့ရဲ့ဖုန်းတွေအတွက် GPU တွေကိုထုတ်လုပ်တော့မှာပါ။ တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် GPU များထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်စနေနေ့တွင်မက်ဒရစ်မြို့၌၎င်း၏စတိုးဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola သည်ခေါက်ထားသည့်ဖန်သားပြင်၏ပုံပျက်သောအခြေအနေကိုပြုပြင်လိမ့်မည်။ ဖုန်းခေါက်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မူလဖြေရှင်းချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Pixel3XL သည်ကင်မရာတစ်ခုတည်းကိုသာဆက်လက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သော်လည်း notch အားလက်ခံမည်ဖြစ်သည်
Google ၏ကြယ်ပွင့် terminal Pixel3XL သည်ကင်မရာနှစ်လုံးကိုနောက်ကျောတွင်ဆက်လက်တပ်ဆင်ထားသည်။
8845 M5 Titanium သည် TENAA တွင်၎င်း၏ယခင်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်
8848 သည်အလွန်စျေးကြီးပြီးအစဉ်အလာမဟုတ်သောဒီဇိုင်းများပါ ၀ င်သောတန်ဖိုးကြီးဇိမ်ခံဖုန်းများကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ 8848 M5 Titanium မှထုတ်လုပ်သောနောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ၎င်းကို၎င်း၏ယခင်နှင့်ဆင်တူသည့် TENAA မှအတည်ပြုပေးခဲ့သည် ငါတို့ကိုပြောတယ်
MyGica ATV1960 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ပါဝါသည်သင်၏ command ထဲတွင်ရှိသည်။
OUKITEL K7 ကိုဒေါ်လာ ၁၅၉.၉၉ ဖြင့်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
OUKITEL K7 ကိုဒေါ်လာ ၃၀ လျှော့စျေးဖြင့်စတင်လိုက်ပါ။ Banggood တွင်ဖုန်းစတင်ရောင်းချခြင်းကမ်းလှမ်းမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Russia 2018. Wear OS မှစီမံခန့်ခွဲသောဒိုင်လူကြီးများ၏စမတ်နာရီဖြစ်သည်
FIFA သည်ဆွစ်ကုမ္ပဏီ Hublot အား VAR အသိပေးချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်
Xiaomi Mi A2 ၏စျေးနှုန်းနှင့်နေ့စွဲကိုစစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Mi A2: ဈေးနှုန်းနှင့်ထွက်ရှိမည့်နေ့ပေါက်ကြား Android ဖုန်းအသစ်အတွက်မျှော်မှန်းထားသောစျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Moto C2 သည် Android Go ပါသောပထမဆုံး Motorola ဖုန်းဖြစ်သည်
Moto C2 - Android Go နဲ့ပထမဆုံး Motorola ဖုန်း။ အနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်မည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note9ကိုသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 512 GB ရှိမည်ဖြစ်သည်
Galaxy Note9တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 512 GB ရှိသည်။ high-end မှလာမယ့်ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Redmi6နှင့် 6A တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာမရှိပါ
Xiaomi Redmi6နှင့် 6A တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာမရှိပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းနှစ်လုံးမှာအပြောင်းအလဲအကြောင်းနောက်ထပ်ရှာပါ။
၎င်းသည် Samsung မှခေါက်သိမ်းထားသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံများကိုပြသပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Samsung ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ခေါ်ဆိုရန်ပထမဆုံးသောခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းမဟုတ်ပါ။
Samsung's Gear S3 သည်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Gear S3 စမတ်နာရီအားဟိုတယ်များရှိဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်
Android One နှင့်အတူ Aquos S3 ဗားရှင်းကို Sharp မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Android Ore ပါ ၀ င်သည့် Sharp Aquos S3 ကိုတောင်ကိုရီးယား၌စတင်မိတ်ဆက်သည်။ အာရှရှိဖုန်းဖြန့်ချိမှု၏ဤဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏စမတ်ဖုန်းမှသင်ကိုင်တွယ်နိုင်သော Full HD resolution ပါ ၀ င်သည့် Wi-Fi ကင်မရာ၊ YI-Cloud Dome Camera 1080P နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
OPPO Find X ၏ဒီဇိုင်းသည်လုံးဝပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ပုံစံအသစ်ကိုရရှိမည့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Vimble2သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Gimbal ကိုယူရို ၉၉ သာပေးရမည်
Androidsis အတွက်အထူးသီးသန့်အထူးကူပွန်ကို သုံး၍ ယူရို ၉၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည့်နာမည်ကျော် Gimbal Vimble 2
Chuwi LapBook လေကြောင်း
Chuwi LapBook Air 2018 သည်လှပသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ပ်တော့ပ်သည်အန်ဒီယိုဒီယမ်အချောထည်များနှင့်အလွန်ပါးလွှာသောကိုယ်ထည်ဖြင့် Macbook Air သို့ခြေရာခံခဲ့သည်။
TV BOX ABOX A4 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ABOX model A4 အမှတ်တံဆိပ်၏ TV BOX သည်2Gb RAM မှတ်ဥာဏ်နှင့်၎င်း၏ 16 Gb သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုအရှုပ်တော်ပုံနှင့်စျေးနှုန်း။
OnePlus6တွေ့ရှိရသောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုပြင်ဆင်ရန် update တစ်ခုရရှိသည်
OnePlus6သည်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ high-end နှိပ် OxygenOS update ကိုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google က Android Enterprise ကိုအကြံပြုထားသောဖုန်း ၁၇ လုံးကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်
Android Enterprise အကြံပြုထားသောအစီအစဉ်တွင်ဖုန်း ၁၇ လုံးထပ်ထည့်သည်။ Google Business Program ၏ကြီးထွားမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony က Xperia မူလနေရာတွင်အစားထိုးဖြန့်ချိမည်
Sony သည် Xperia Home ကိုအစားထိုးရန်အလွှာတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများသို့ရောက်မည့်အလွှာအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi A1 သည် Android 8.1 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုစတင်ခဲ့သည်
Android 8.1 Oreo သည် Xiaomi Mi A1 ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်။ ယခုအစောပိုင်း beta သုံးစွဲသူများထံစတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော update ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note9သည်ဖန်သားပြင်နှင့်ဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်အသစ်တစ်ခုထည့်နိုင်သည်
ကိုရီးယားမှနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအရ Galaxy Note9သည်စျေးကွက်သို့သီးခြားခလုတ်ဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်
OUKITEL အင်ဂျင်နီယာများကတွန်းအားပေးသည်။7mAh ဘက်ထရီဖြင့် OUKITEL K10.000 စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် OUKITEL K19 နှင့်၎င်း၏ ၁၀,၀၀၀mAh ဘက်ထရီကိုပထမဆုံးကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချနိုင်သည်။ သင်သည်ဤကူပွန်နှင့်အတူ $7ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
Huawei သည်အချို့သောမော်ဒယ်များအား Windows 10 ကို Cloud မှတဆင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
အာရှကုမ္ပဏီ Huawei သည် ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုအပြည့်အဝ cloud ဖြင့်ဖြတ်သန်းရန်ခွင့်ပြုမည့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
OnePlus6သည် ၂၂ ရက်အတွင်းရောင်းရငွေတစ်သန်းအထိရောက်ရှိသည်
OnePlus6သည် ၂၂ ရက်အတွင်းတစ်သန်းရောင်းချသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အောင်မြင်မှုသည်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရောင်းချလိုက်သောယူနစ်တစ်သန်းကျော်သွားသည်။
Xiaomi Black Shark ကိုအပြာအရောင်သစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်
Xiaomi မှ Black Shark ကိုတရုတ်ပြည်တွင်အပြာရောင်ဖြင့်လွှတ်တင် ဖြန့်ချိသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ် Meizu 16 နှင့် 16 Pro တို့ကိုစစ်ထုတ်သည်
Alcatel3နှင့် 3L သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
Alcatel3နှင့် 3L: စပိန်နိုင်ငံတွင်စျေးနှင့်တရားဝင်ရောင်းချခြင်း။ စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းနှစ်လုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
%% ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်စွမ်းအင်စနစ် Bluetooth Bluetooth စပီကာအသစ်ဖြစ်သော Energy Music BOX 5+ YALL Edition%
Samsung Gear S4 မှာအရင်ကထက်ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားပါတယ်
အရာအားလုံးက Samsung မှ Gear S4 ကိုဈေးကွက်ထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူ S4 3n 90 mAh ကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်ဟုအားလုံးကထင်နေပုံရသည်။
Samsung က Gear S4 ကို Galaxy Note9နဲ့အတူကြေညာနိုင်ပါတယ်
လာမည့် Gear S4 စမတ်နာရီသည်သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင် Unpacked ကာလအတွင်း Galaxy Note9နှင့်အတူလာမည်။
Huawei Mate 10 သည်၎င်း၏အသစ်သော update နှင့်စူပါနှေးကွေးစွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်လိမ့်မည်
Huawei Mate 10 ကိုအဆင့်မြင့်နှေးကွေးစွာအဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်တွင်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များပါဝင်မည်ကိုရှာဖွေပါ။
Asus Zenfone 5Z သည်ဥရောပသို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာပြီ
Asus Zenfone 5Z ကိုယူရို ၄၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ MWC 499 တွင်တင်ပြပြီးနောက် Asus ဖုန်းစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သုံးလအတွင်း Huawei P20s သည်စီးရေ ၆ သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ Huawei ၏ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအဆင့်မြင့်ရောင်းအားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia X6 က notch အသစ်ကိုသူ့ရဲ့အသစ်စက်စက်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းကိုဖုန်းသို့မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိသည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note9၏ဘက်ထရီမှာ ၄၀၀၀ mAh ဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့်သတင်းများအရ Galaxy Note9သည်စျေးကွက်သို့ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီဖြင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသို့ ၀ ယ်လိုသူများ၏တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုအရ Xperia XZ3 တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။
နောက်ထပ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Sony ၏နောက်ရှေ့ကင်မရာစနစ်ဖြင့်စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်
Galaxy Note9ကိုစျေးကွက် ၅ ခုဖြင့်ရောင်းချမည်
နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ Galaxy Note9သည်စျေးကွက်အသစ်သို့ထင်ရှားသောအရောင်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အညိုရောင်၊ အချို့သောနိုင်ငံများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအရောင်များဖြင့်ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်။
OnePlus6ပိုးဖြူသည်ပြန်လာသည်
OnePlus6ပိုးဖြူကို online တွင်ထပ်မံရရှိနိုင်သည်။ ထပ်မံဖြန့်ချိသောဖုန်း၏အထူးဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Lenovo Z5 သည်ပထမဆုံးနေ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချသည်။ စတင်မိတ်ဆက်ချိန်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo Nex: Ultra FullView မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းပါသည့်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းအသစ်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Vivo သည် Vivo Nex ကိုဗားရှင်းသုံးမျိုးဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ VivoVivo ၏တင်ဆက်မှုအပြီးတွင် Vivo Nex ကိုကွဲပြားသောဗားရှင်းသုံးမျိုးဖြင့်ကြေငြာလိုက်သည်။ MWC တွင် Vivo Apex ၏တင်ပြချက်။
Samsung Galaxy S10 မှာခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရှေ့စပီကာမရှိပါ
Samsung Galaxy S10 သည်မျက်နှာပြင်ရှိတုန်ခါမှုစနစ်ဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်စပီကာကိုဖယ်ရှားပေးသည့်ပထမဆုံး terminal ဖြစ်နိုင်သည်။
Huawei မှယခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၂၇၀ ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Huawei သည်ဖုန်းသန်း ၂၀၀ ကျော်ရောင်းလိုသည်။
Samsung သည် Huawei ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောမျက်နှာပြင်တွင် OLED မျက်နှာပြင်ကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၆.၉ လက်မရှိသည်
တောင်ကိုရီးယားမှသတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Samsung သည် ၆.၉ လက်မအရွယ် Huawei စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် panel ကိုထုတ်လုပ်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Asus Zenfone 5Q: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားပုံစံအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဆိုနီသည်၎င်း၏ Xperia Home Cape ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုစွန့်လွှတ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာကိုဖယ်ရှားရန်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Xiaomi Mi Max3သည်တရုတ်ပြည်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးဖြစ်သည်
Xiaomi Mi Max3ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဖုန်း၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်သည်။
Sony Xperia XZ2 ကို Android P Beta2သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Sony က Android P Beta2ကို Xperia XZ2 terminal များအားလုံးတွင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Note9သည်ဤရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကင်မရာများကိုအလျားလိုက်နေရာချထားပြန်သည်
Samsung Galaxy Note9၏နောက်ထွက်ပေါ်လာမှုတစ်ခုက၎င်းသည်၎င်း၏နောင်တော်အတိုင်းအလျားလိုက်ကင်မရာဖွဲ့စည်းမှုကိုပြသလိမ့်မည်။
Nokia X6 International Version ကိုထိုင်ဝမ်တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်
HMD Global သည်လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကတရုတ်နိုင်ငံတွင် Nokia X6 ကိုစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းကိရိယာသည်ရောင်းအားအားလုံးတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတရုတ်ပိုင်နက်ထဲကလုပ်ငန်းများ၌။
Google Home နှင့် Home Mini သည်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုပြီးဖြစ်သည်။ တံဆိပ်၏စမတ်စပီကာပြီးသားစပိန်စကားပြောနှင့်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Nokia X6 ကိုတရုတ်ပြည်မှာပြန်ရောင်း
Nokia X6 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်၎င်း၏ Flash အရောင်းအဝယ်၌တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
စစ်ထုတ်ထားသောစျေးနှုန်းများနှင့် Vivo Nex ဗီဒီယို
Vivo NEX အသစ်၏ဈေးနှုန်းများမှာယိုစိမ့်နေပြီးဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်များရမည့်စျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ထပ်မံလည်ပတ်ရန်သဘောတူညီချက်ရရှိထားသည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှရရှိသောသဘောတူညီမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6ပိုးဖြူသည်ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင်ပြန်လည်စတင်မည်
OnePlus6ပိုးဖြူသည်ဇွန် ၁၂ ရက်တွင်ဈေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကရောင်းချပြီးနောက်ဖုန်းစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
New Motorola One Power ယိုစိမ့်မှုက၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
ယခုအခါ Motorola One Power သည်၎င်း၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြသနေပြီဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Huawei P20 PRO
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကျော်အကြာအားပြင်းထန်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်၊ Huawei P20 PRO ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုနေရာတွင် Huawei ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောပြသည်။
Samsung Galaxy J7 (2018) ကိုဤနေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Samsung Galaxy J7 (2018) ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်သားမှုနည်းပါးသောကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအသေးစိတ်!
Samsung Galaxy J3 (2018) - ကုမ္ပဏီအသစ်၏ဝင်ပေါက်အသစ်
Galaxy J3 (2018) - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ဆုံးဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo Find X ၏အင်္ဂါရပ်များသည် TENAA တွင်လျင်မြန်စွာပေါက်ကြားခဲ့သည်
Oppo Find X ကိုမကြာသေးမီက TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Wear OS က Samsung ရဲ့နောက် Gear S4 ကိုစီမံမှာမဟုတ်ဘူး
အာရှကုမ္ပဏီ Samsung သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android Wear ကိုနောက်ထပ်စမတ်နာရီဖြစ်သော Samsung Gear S4 အဖြစ်အသုံးမပြုတော့ပါ
Vivo Nex နှင့် Nex S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Vivo Nex နှင့် Nex S: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဒီဇိုင်းပေါက်ကြားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်ကပေါက်ကြားခဲ့သည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy A9 Star နှင့် Galaxy S9 Star Lite - Samsung ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Galaxy A9 Star နှင့် Galaxy S9 Star Lite: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဆမ်ဆောင်းရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်များအကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြသ
Galaxy S9 က iPhone X ထက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်း
Sပြီလတွင် Galaxy S9 သည် iPhone X ထက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Aprilပြီလအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အမြင့်ဆုံးရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
[ဗွီဒီယို] ၁၀၀၀၀ mAh ဘက်ထရီရှိသော OUKITEL K7 သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စာမေးပွဲဖြစ်သည်
OUKITEL K7 သည်စီးပွားရေးနှင့်အားကောင်းသောမိုဘိုင်းဖုန်း ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက္ထရီပါ ၀ င်သောအကြောင်းပြောနေသည်။ ၎င်းသည်အတွင်း၌သယ်ဆောင်ထားသည့်ကြီးမားသည့်ဘက်ထရီရှိသော်လည်း၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် ပိုမို၍ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်မည်၊ ကင်မရာ၏
BlackBery KEY2 ၏တရားဝင်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်
BlackBerry KEY2 ၏တရား ၀ င်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင် Evan Blass သည် BlackBerry terminal အသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုစီစစ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
OnePlus6ကိုအဖြူရောင်နှင့် Bullets Wireless နားကြပ်များရောင်းထွက်သွားသည်
OnePlus6နှင့် Bullet Wireless ကိုဥရောပနှင့်အမေရိကတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီအထူးဗားရှင်းမှာအဆင့်မြင့်အောင်မြင်မှုရရှိနေခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Redmi6အသစ်ကိုဇွန် ၁၂ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Redmi6ကိုဇွန် ၁၂ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy Note9၏ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပြန်စီခြင်းကိုစစ်ဆေးသည်
OnLeaks ကယိုစိမ့်သောစက်ယန္တရားကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်လည်ပတ်စေပြီးယခုတကြိမ်က Galaxy Note9၏ပုံစံကိုပြသသည်။
Moto Z3 Play - Motorola ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Moto Z3 Play: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအထိရောက်ရှိနေတဲ့ Motorola နဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းကိုအသစ်ပြန်ချပေးလိုက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Asus Zenfone Live and Live L1: Android Go ဖြင့်ဖုန်းအသစ်များ
Asus Zenfone Live and Live L1: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အနိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi 8 ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာတစ်မိနစ်တောင်မရောင်းပါဘူး
Xiaomi Mi 8 ကို ၃၇ စက္ကန့်အတွင်းတရုတ်ပြည်တွင်ပထမဆုံးရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ဖြန့်ချိသောအခါတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အောင်မြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Riley Touchscreen Smartwatch: Wear OS နှင့်အတူလက်ပတ်နာရီအသစ်
Riley Touchscreen Smartwatch Marc Jacobs ၏နာရီနှင့် Wear OS နှင့်အတူ။ operating system ဗားရှင်းသစ်ကိုအသုံးပြုသောစျေးကွက်သို့ဝင်သောစမတ်နာရီသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်ဇွန်လ ၇ ရက်တွင် MIUI 10 ကိုစတင်မည်
Xiaomi မှ Miui 10 အထိစိတ်ကြိုက်အလွှာသစ်ကိုဇွန် ၇ ရက်တွင်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်မည်ဖြစ်သည်။
Lenovo A5 နှင့် Lenovo K5 မှတ်ချက် - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့် Launch ။ မနေ့ကတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
AnTuTu ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်လပြီးတစ်လစျေးကွက်ထဲမှာစွမ်းအားအရှိဆုံးသောဆိပ်ကမ်းများစာရင်းကိုယူဆောင်လာသည်။ ထိုအခါသမယတွင်လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကတရုတ်ကုမ္ပဏီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော OnePlus6အသစ်စက်စက်စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Aermoo V1 အကောင်းဆုံးရေစိုခံအသံ«ရေစိုခံ»
Aermoo V1 သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်နွေရာသီအားလပ်ရက်အဖော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်၊ ကောင်းမွန်သောအသံနှင့်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိနိုင်သည့်အပြင် IPX6 အသိအမှတ်ပြုထားသော Bluetooth စပီကာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
Lenovo သည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Lenovo Z5 ကိုစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အညီအတော်လေးကိုက်ညီခဲ့သည်။ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ၎င်းသည်ဘက်တစ်ဖက်စီ၏ကျဉ်းမြောင်းသောမာဂျင်များဖြင့်ကိုင်တွယ်ထားသည်မှာထူးခြားသည်။
UnGoxing နှင့် MyGica ATV1960 ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်သော TV BOX ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သင့်စိတ်ကိုစူးစမ်းစေမည့်အဝေးထိန်းခလုတ်များပါရှိသောထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ TV BOX ဖြစ်သော MyGica ATV1960 ၏ unboxing နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များ။
Asus VivoWatch BP - သင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်စမတ်နာရီသစ်
Asus VivoWatch BP - အသုံးပြုသူ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတာသည့်စမတ်နာရီ။ ထိုင် ၀ မ်တွင်ပြုလုပ်သောပွဲတစ်ခုတွင်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့သော Asus နာရီအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Band3ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြိမ် ၆၄၀,၀၀၀ သိမ်းဆည်းထားသည်
Xiaomi Mi Band3သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားချက်ပေါင်း ၆၄၀,၀၀၀ ရရှိသည်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးရောင်းချခြင်းမတိုင်မီကြိုတင်မှာကြားမှုများရရှိထားသည့်သင့်တိုင်းပြည်ရှိလက်ကောက်၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OPPO Find X ကိုပဲရစ်မြို့တွင်ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
အတည်ပြုသည်: OPPO Find X ကိုပဲရစ်မြို့တွင်ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင်တင်ပြမည်။ ဥရောပဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုလည်းမှတ်သားထားသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။